DNN@Ground Zero : स्कुलमा आन्दोलनको छायाः अलमलिए विद्यार्थी, थन्कियो कापी कलम - Ratopati
मंसिर १० | राजेश भण्डारी
सप्तरी– राजविराजको जनआन्दोलन चोकनजिकै रहेको दिलीप साहको घरका पर्खालमा आधा दर्जनभन्दा बढी गोलीका डोब देखिन्छन् । बुधबार त्यही गोलीका डोब नियाल्दै एक स्कुले छात्रा केशो अनिरुद्रवती माध्यमिक विद्यालयतर्फ अगाडि बढिन् ।
गएको आइतबार प्रहरीको गोलीले ज्यान गुमाएका साहको घरबाट केही मिटरअगाडिको चोकमा टायरका टुत्रका भेटिन्छन् ।
त्यही टायरका टुक्रा कुल्चँदै अनिरुद्रवती मावि पुगेकी रीना यादवले पढ्न नपाएको महिनौं बितिसक्यो ।
स्कुलको गेटबाट भित्र पस्दा रीनाका एक–दुई साथीहरू निराश मुद्रामा बसिरहेका थिए । उनले परैबाट साथीहरूलाई मैथिलीमा सोधिन्, ‘आज पनि पढाइ हुँदैन ?’
अन्योलमै रहेका अन्य छात्रामध्ये एकले जवाफ फकाइन्, ‘खै, हुँदैन जस्तो छ ।’
करिब एक साता अघिसम्म आक्कलझुक्कल पढ्न पाएका उनीहरू राजविराजमा गोली चलेपछि घरबाट निस्केका थिएनन् ।
बुधबारबाट कफ्र्यु खुले पनि राजविराज नगरपालिका र त्यस आसपासका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । रीनाजस्ता स्कुले युवती निषेधाज्ञाको भाषा बुझ्दैनन् । शिक्षक उपेन्द्रकुमार यादवले, ‘तिमीहरू आज थोरै छौ, भोलि अरु साथीलाई पनि आउनु, आज जाओ’ भनेपछि उनीहरू पोलिथिनको झोलामा च्यापेर लगेको कापी–कलम जस्ताको तस्तै च्यापेर घर फर्कन बाध्य भए ।
अमिलो अनुहार लगाएर घर फर्कंदै गरेकी रीनाले स्कुलको गेटबाट बाहिरिँदै भनिन्, ‘डरले साथीहरू स्कुल आउनै मान्दैनन्, एक–दुई जनालाई मात्र सरले पढाउनुहुन्न ।’
सप्तरीका स्कुलहरूमा यसरी विद्यार्थी स्कुल आउने र पुस्तक जस्ताकौ तस्तै लिएर घर फर्कने गरेको महिनौं भइसक्यो ।
मधेस आन्दोलन सुरु भएपछि दिउँसो कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव भएपछि बिहानी सत्रमा कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको थियो । केशो अनिरुद्रवतीका शिक्षक उपेन्द्र कुमार भन्छन्, ‘बिहान पनि कक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन, आइतबार गोली चलेपछि त झन् ठप्प भयो ।’
सोही विद्यालयमा अध्ययनरत अर्की छात्रा कुसुम बर्मा गणित र विज्ञानमा कमजोर छिन् । भन्छिन्, ‘त्यो दुई विषय घरमै बसेर पढ्दा पनि आउँदैन । ममी–बाबा स्कुल नजानु, भोलि केही भएमा कसले जिम्मा लिन्छ भन्नुहुन्छ । अब जाँचमा कसरी पास हुने हो थाहा छैन ।’
विद्यार्थीहरू यसरी अलमलिएका छन् । विद्यार्थीमात्रै के ? प्रधानाध्यापक, शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत अलमलमा पर्दा तराईका जिल्लाहरूमा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा हुन सकेन ।
दोस्रो त्रैमासिक आउने बेला भइसकेको छ । तर, आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले ‘आउट ड्रेस’ मा पढाउन निर्देशन दिएसँगै विद्यार्थीहरू थप त्रसित बनेका छन् ।
यो संवाददाता पुग्दा राजविराजको मुख्य बजारभन्दा केहीभित्र रहेको वल्र्ड भिजन मोर्डन क्याम्पसका कोअर्डिनेटर कलेजमा एक्लै थिए । गएको साउन अन्तिम सातादेखि बन्द भएको सो कलेज बीचमा करिब १५ दिन चल्यो । स्कुल र कलेजमा गरी कुल एक हजार विद्यार्थीको हाजिरी पुस्तिकामा नाम भए पनि लामो समयदेखि सबै गयल भएका छन् ।
वल्र्ड भिजन कलेजका कोअर्डिनेटर शम्भु यादव भन्छन्, ‘विद्यार्थी नै आउँदैनन्, हामीले जबर्जस्ती बोलाएर पनि के गर्ने ? कसले जिम्मा लिन्छ ?’
सगरमाथा अञ्चल अस्पतालनजिकै रहेको शान्ति इन्दिरा छात्रा माविमा बुधबार मुस्किलले २० विद्यार्थी पढ्दै थिए । एउटै कक्षाका २० जना पनि होइनन्, नर्सरीदेखि कक्षा ६ सम्मका सबै जोड्दा मुस्किलले त्यति पुग्थे । जेहोस्, एउटै विद्यालयमा त्यति विद्यार्थी जम्मा हुनु आन्दोलनको आगोले जलिरहेको तराईमा नयाँ दृश्य थियो ।
शान्ति इन्दिराका शिक्षक राजनारायण यादव भन्दै थिए, ‘अस्ति हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई पनि प्रहरीले लखेटी–लखेटी कुटे । त्यसयता उहाँहरू पनि आउन छाड्नुभएको छ, विद्यार्थीहरू आउन छाडेको त महिनौं भइसक्यो ।’
बुधबार बिहान सप्तरीको राजविराज मावि पुग्दा स्कुलको मूल गेट ढप्क्याइएको थियो । स्कुलका सबै ढोकामा ताला झुन्डिएका थिए । स्कुल प्रांगणमा पारिपट्टिबाट गुन्जिएको ‘हरेराम हरेकृष्ण’ को आवाज सुनिन्थ्यो । स्कुल चलेको भए विद्यार्थीले पढेको आवाज नै चर्को हुन्थ्यो होला ।
एसएलसी दिनेका लागि विकल्प ट्युुसन
सप्तरीका प्रायः विद्यालय ठप्प भइरहेको बेला एउटा ट्युसन सेन्टरमा भने विद्यार्थी झुम्मिएका थिए । ‘प्यासिफिक ट्युटोरियल’ नामक ट्युसन सेन्टरमा दुई शिक्षक ट्युसन पढाइरहेका थिए । साइडमा विद्यार्थीका साइकल पार्किङ गरिएको थियो । प्यासिफिकमा गणित पढाइरहेका एक शिक्षकले भने, ‘यी सबै एसएलसी दिने विद्यार्थीहरू हुन्, दिउँसो पढाउन मिल्दैन, बिहान केही घन्टा हेरिदिने गरेका छौं ।’
सँगै रहेका अर्का शिक्षक थप्दै थिए, ‘केहीबेरमा बन्द गरेर हामी पनि आन्दोलनमा जान्छौं, मधेस आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छ ।’
आन्दोलनले नछोएको मदरसा
जताततै आन्दोलन र त्यसको छाया देखिए पनि एउटा मदरसा भने गज्जबले चलिरहेको थियो । मदरसाका शिक्षक एकसुरमा मुस्लिम शब्द घोकाइरहेका थिए ।
आन्दोलनले मदरसामा कुनै असर नगरेको शिक्षक मोहम्मद जमरुद्दिन बताउँछन् । ‘हाम्रो मदरसा मुख्य बजारभन्दा धेरै भित्र छ, त्यसैले होला, कसैले बन्द गर्न भनेको छैन,’ उनले भने, ‘होस्टलमा बस्ने ३० विद्यार्थीलाई आन्दोलनको असर परेको छैन । होस्टलमा नबसेकाहरू बन्दको असरले अलि ढिला यहाँ आइपुग्छन् ।’
शान्ति इन्दिरा छात्रा माविका केही विद्यार्थी र मदरसा अपवाद मात्र थिए । तराईमा अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । तराई आन्दोलनको छायाले विद्यार्थीहरू अलमलिएका छन्, कापीकलम थन्किएको छ ।